मौरी पालन गर्दै हुनुहुन्छ ? जान्नै पर्ने यी कुरा « News24 : Premium News Channel
मौरी पालन गर्दै हुनुहुन्छ ? जान्नै पर्ने यी कुरा
मौरी पालन एक कृषि पेसा हो । यो पेसा मह का साथै मैन जस्ता बस्तुको उत्पादन गर्ने गरिन्छ । मान्छेले आज भन्दा १५,००० बर्स आघि देखि जङ्गली मौरीबाट मह संकलन गर्दै आएका थिए । तर आज भन्दा ४,५०० बर्स आघि देखि येसलाई घरमै पल्न थलियो ।त्यसबेला सदरन छुरि र धुवा को प्रयोग गरेर मह निकालेर बयाममा भर्ने चलन थियो ।
१८ औं सताब्दिमा युरोपियन नागरिकहरूले मौरीको बारेमा बुझ्दै पेसालाई सन् १८५१ मा आधुनिक घारको निर्माण गरे, जस्मा मौरीलाई असर नपुर्याई वा नस्ट नगरि मह निकल्न सकिन्थ्यो । यस पेसाका लगि धेरै जग्गा वा लगानिको अवश्यकता पर्दैन । यो पेसा कम मेहेनतले पनि सजिलै गर्न सकिन्छ ।
मौरीको २०,००० भन्दा बढी प्रजातिहरू छन्। यि मध्ये धेरै शान्त स्थानमा वा एक्लै बस्न मन पराउछन।केहि मौरीहरू जंगली हुन्छन (जस्तै:-खागो)। मौरी पालन सामजिक मौरीको प्रजातिलाई पाल्नु हो, जस्मा १,००,००० वटा मौरी हुन्छन ।
जंगली मह संकलन, जंगली मौरी को घार
जंगली मौरीको घारबाट मह संकलन गर्नु मान्छेको सनातन कार्य हो। यो कार्य अफ्रिका,एसिया,अष्ट्रेलिया र दक्षिण अमेरिका अझै चलिरहेको छ। यास्तो गर्न मौरीलाई धुवाँ लगाएर धपाइन्छ । यसो गर्दा मौरीको घार समेत नस्ट हुन सक्छ।
मौरीमा अनुसन्धान :
१८रौ सताब्दिमा युरोपमा भएको अनुसन्धानमा मौरीको बरेमा थप जानकरी हरु पत्ता लगे। उनिहरुले रनी मौरीले अन्दा पर्ने कुरो बिचार गरे र मह निकल्दा रनी मौरीलाई असर नपुराउदा मौरीको घार नस्ट नहुने कुरो पत्ता लगाए। त्यसैले हुबर लाई फादर अफ् मोदन बीसाइन्स भनिन्छ।
घारको व्यवस्थापन :
मौरीलाई हल्ला मन पर्दैन त्यसैले यसको घार धेरै हल्ला हुने तथा धेरै हावा लाग्ने स्थानमा बनाउनु हुदैन । यसले फूलबाट मह बनाउने भएकाले फूलबारी छेउमा भए राम्रो हुन्छ ।
मौरीले आफ्नो खाना आफैं खोज्छ तर फूल वा तोरीबारी छेउमा छ भने यसलाई सजिलो हुन्छ ।
मह र मैन को प्रयोग :
मह र मैनलाई औषधि बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।
महलाई मैनबत्ति बनाउन, मुर्ति बनाउन जस्ता कार्यमा प्रयोग गरिन्छ ।
महलाई औषधिको साथमा सेवन गरिन्छ ।
मौरी पालनका लगि आवस्यक बस्तु :
धुवाउने बस्तु वा स्मोकेर